Richard Stallman akabatwa muchitima muExtremadura ... | Linux Vakapindwa muropa
Richard Stallman auya kuSpain yeimwe yehurukuro dzake iyo yaakatijairira nezvemahara software. Zvakanaka, mugadziri weAmerica akabatwa muchitima kweinopfuura awa nehafu nekuda kwezvinetso neiyi nzira yekufambisa kwakaratidzika kunge kusiri mune kwayo yakanaka mamiriro. Nzira yaakavharirwa ndiyo yaifamba kubva kuBadajoz kuenda kuMadrid, nekudaro ichitaurirana guta reExtremaduran neguta guru. Kunyanya, yaive muTalavera de la Reina ...
Sezvinoonekwa mumufananidzo, vese vafambi naStallman iye akabata bepa raigona kuverenga kusimbiswa, uye panguva ino yanga isiri yesoftware yemahara, asi nezve kuda kwechitima chakakodzera izvozvi! Zvitima zvakawanda zveSpain hazvipfuure panguva yavo yakanakisa, uye Renfe haawanzo kutarisira izvo zvaanoti "zvikonzero zvinopfuura simba raRenfe" asi chokwadi ndechekuti vafambi vanobhadhara basa iro dzimwe nguva risingakwani kana kukundikana.
Pamwe inzira isina hunhu yekusimudzira rimwe basa, iyo inodhura, uyel AVE, izvo zvinoshanda zvakanyanya zvirinani, zvinokurumidza zvakanyanya uye hazviwanzo kuve nekunonoka kana rudzi urwu rwekusagadzikana. Asi zvinoitika kuti chitima chakakurumbira-chekumhanyisa hachisvike munzvimbo dzese dzeSpain uye kunyangwe zvikadaro, vamwe vangangotadza kubhadhara izvo mutengo wetikiti munzira iyi yekufambisa. Nguva zhinji zvinosvika kune vazhinji vasingazivikanwe, uye panguva ino vaive baba vemahara software iye amene akaona mashandiro aya.
Kutsamwa kwakajairika pakati pevakwiri vechitima ichi, uye kuravira kwakashata mumuromo waStallman uyo akashanyira Extremadura muna 2007 kunopa mubairo une chekuita nesoftware yemahara uye ikozvino pakudzoka kwake akaona rudzi urwu rwekusagadzikana. Vamwe vafambi varatidzira uye vanotaura kuti chitima chinopfuura neExtremadura chiri inotyisa uye inokodzera kunge nyika yechitatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Richard Stallman akabatwa muchitima muExtremadura ...